Wadna Xanuun..Sidee Loola Dhaqmaa Markaa Kaligaa Tahay | Xaqiiqonews
Wadna Xanuun..Sidee Loola Dhaqmaa Markaa Kaligaa Tahay
kaliya hadii aan ku fakirno in wadna xanuun na haayo waxa ay na dareen siineysaa cabsi, maxaa yeelay waxaan ognahay in wadno xanuunka intiisa badan uu ku soo dhammaado dhimasho.
Habka aad ula taacaamuleyso wadnka xanuunka waxa uu door weyn ka qaadan karaa badbaadinta noolol.
Laakiin inteena badan waxaa nagu beeran walwal, sababtoo ah uma sii diyaari garoobin qaabka aan ula tacaamuleyno wadna xanuunka dagdaga ah.
Halkan hoose waxa aan idinku soo gudbineynaa talooyin caafimaad oo hadii la dabaqo ay kordheyso fursadaha noolasha qofka inta uu ka helaayo adeeg caafimaad.
Hadii ay jiraan dawooyin aad qaadato oo laguugu soo qoray xanuunka wadnaha waxaa lagula talinayaa in qaadato dawooyinkaasi inta aad ka gaareyso goobta adeegga caafimaadka.
Hadii ay tahay markii kugu horeysay ee aad dareento wadno xanuun waxaa laguula talinayaa in aad si dagdag ah u isticmaasha kaniinig Aspirin, sii fiican u ruug, sababtoo ah Aspirin-ka waxa uu ka hortagaa in dhiigga xirmo.
Talooyinka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah in qofka uusan ka dhaqaaqin goobtiisa si looga fogaado jug horleh oo soo gaarto xubinta muruqa wadnaha ee iyaduba daalan.
Waxaa lagula talinayaa in aad xoog u riixdo goobta ku aadan wadnaha si muruqa loogu caawiyo in uu bambeeyo dhiigga, hadii arintaaasi ay noqoto mid uusan iskiis u sameysan karin qofka bukaanka waxaa haboon in qofka kale sidaas u sameeyo.